डा. केसी – Page2– Himalaya Television
सरकार र अनशनरत डा. केसी पक्षबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, आन्दोलन घोषणाको तयारी
२४ असोज, २०७७ काठमाडौं । सरकार र आमरण अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिहरुबीचको वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको छ। डा केसीको वार्ता टोलीका सदस्यहरुले बिहीबार भएको समझदारीभन्दा पनि सरकार पक्ष पछि हटेपछि सहमति बन्न नसकेको बताएका छन। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि...
अनशनरत डा. केसीको अवस्था गम्भीरः चिकित्सक
२३ असोज, २०७७ काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार र सर्वसुलभ उपचारको माग गर्दै २६ दिनदेखि अनशनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बनेको छ। उहाँको मुटुको चाल अनियमित रहेको, धड्कन असन्तुलित रहेको भन्दै चिकित्सकले कुनै पनि बेला मुटुको चाल...
सरकारले वार्तामा गरेको ढिलाइप्रति अनशनरत डा.केसी पक्षको असन्तुष्टि
२३ असोज, २०७७ काठमाडौं । सरकारले वार्ताका लागि ढिलाइ गरेको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ । डाक्टर केसी पक्षले बिहीबारको वार्तापछि सरकारी टोली सम्पर्कमा नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सरकार र डाक्टर केसी पक्षको वार्ता...
सरकार र अनशनरत डा. केसी पक्षबीचको वार्ता सहमति नजिक
२३ असोज, २०७७ काठमाडौं । सरकार र २६ दिनदेखि अनशनसत डा गोविन्द केसीको वार्ता टोली सहमति नजिक पुगेको छ । शिक्षा सचिव गोपी मैनाली र डा जीवन क्षेत्री नेतृत्वको दुई टोलीबीच हिजो दिनभर छलफल भएको थियो । वार्ताका क्रममा...
अनशनरत डा. केसी पक्ष र सरकारबीच वार्ता जारी
२२ असोज, २०७७ काठमाडौं । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसी पक्ष र सरकारबीच सिंहदरबारमा वार्ता जारी छ । आज दुई चरणमा वार्ता भएको छ । बिहान साढे दशबजे शुरु भई साढे दुई बजेसम्म पहिलो र चार बजेपछि अर्को चरणमा...
अनशनरत डा. केसी पक्ष र सरकारबीच आज औपचारिक सम्वाद हुने
२२ असोज, २०७७ काठमाडौं । आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसी पक्ष र सरकारबीच आज औपचारिक सम्वाद हुने भएको छ । सम्वादका लागि हिजो दुबै पक्षले वार्ता टोली गठन गरेका छन् । सरकारी र डा केसीको वार्ता टोलीबीच आज दिउँसो...
डा. केसीको माग पूरा नगरेकोमा कांग्रेसद्वारा सरकारको आलोचना
२१ असोज, २०७७ काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले २४ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन नगरेकोमा सरकारको कडा आलोचना गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकालेर डा. केसीसँग सरकारले वार्ताका लागि कुनै...
२४ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै
२१ असोज, २०७७ काठमाडौं । २४ दिनदेखि अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था झनै बिग्रँदै गएको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधार लगायतका मागसहित २४ दिनदेखि अनशनमा रहेका डाक्टर केसीको शरीरमा अक्सिजन र रक्तचाप घट्दै गएको उपचारमा...
डा. केसीको समर्थन गर्दै बालुवाटारमा प्रदर्शन, यसरी सडकमै सुतेर उपचार (भिडियोसहित)
२० असोज, २०७७ काठमाडौं । २३ दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न दबाव दिँदै हरेक दिन प्रदर्शन भैरहेको छ । डाक्टर केसीका माग जनमुखि भएपनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै राजनीतिक दल, चिकित्सक र आम नागरिकले सरकारमाथि दबाब...
डा. केसीलाई अनशन त्याग्न शिक्षा सचिव मैनालीको आग्रह
२० असोज, २०७७ काठमाडौं । सत्याग्रहको २३ औं दिन सरकारको तर्फबाट शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनालीसहित ३ जनाको टोलीले डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेटेको छ । शिक्षा सचिव मैनाली सहितको टोलीले आज डाक्टर केसीलाई शिक्षण अस्पताल पुगेर भेटेको हो । टोलीले...